﻿Download Iphakethe Lezinsiza Zolimi Le-Microsoft® Office – IsiZulu from Official Microsoft Download Center
e-DariIsi-AlbaniaIsi-Amharic saseIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsi-BelarusIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiCatalaIsiFilipinoisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGujaratiIsiHausaIsi-IcelandIsi-IgboIsiKannadaIsiKhmerIsiKinyarwandaIsiKonkaniIsiKyrgyzIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNorway (esiyisiNynrsk)Isi-OriyaIsiPashtoIsiPediIsiPersiaIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRomanshIsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSinhalaIsiSwahiliIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiTswana (saseNingizimu Afrika)Isi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiWelshIsiWolofIsiXhosaIsiYorubhaIsiZuluNgokwe-IrishScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSindhi - Islamic Republic of PakistanTurkmen (Latin) - TurkmenistanUrdu - PakistanUyghur - China
Ngemva kokufaka, Iphakethe Lezinsiza Zolimi Le-Microsoft - IsiZulu izinketho zamakhono nokuhambisana zitholakala ngaphakathi kwezinhlelo ze-Office kanye nohlelo Lokuthandwayo Kolimi Lwe-Microsoft Office.
Ukuze uthole imininingwane yakamuva yezimfuneko Zesistimu bona isixhumanisiIzimfuneko zesistimu ye-Office
I-Microsoft Windows 8 - 32 noma u-64 bhithi we-OS
I-Microsoft Windows 10 - 32 noma u-64 bhithi we-OS. (Kubasebenzisi besikhathi esisodwa se-Office 2019 i-Windows 10 iwukuphela kwe-OS esekelwayo)
Qaphela:Sicela wenze isiqiniseko sokuthi ufaka Amaphakethe Esevisi Esistimu yakho Yokusebenza ukuze wenze isiqiniseko sokusekelwa okugcwele kolimi lwakho.
IsofthiweNoma yiluphi uhlelo lwesuthi ye-Office 2016 (noma olusha) noma ezimele equkethe i-Microsoft Excel, i-Microsoft Lync, i-Microsoft OneNote, i-Microsoft Outlook, i-Microsoft PowerPoint noma i-Microsoft Word luzosekela Iphakethe Lezinzisa Zolimi Lwe-Microsoft Office 2016 (noma olusha) - IsiZulu.
Ikhompyutha NephrosesaIphrosesa engu-1.6 GHz enokusekelwa kwe-SSE2 noma ngaphezulu; u-4GB we-RAM; u-2 GB we-RAM (u-32-bhithi) noma ngaphezulu
Isikhala sediskiNgaphezu kwesikhala sediski yehadiwe esetshenziswa izinhlelo ze-Office ezifakiwe,
kukhona u-4 GB wesikhala sediski yehadiwe.
Zonke ezinye izimfuneko zesistimu ziyefana nalezo zohlelo lwe-Office ozisebenzisa Nephakathe Lezinsiza Zolimi Lwe-Microsoft Office - IsiZulu.
Iphakethe Lokusebenzisa Lolimi Lwe-WindowsKunconywa ukuthi ufake Amaphakethe Okusebenzisana Olimi Lwe-Windows ukuze uthole ukusekelwa kolimi okugcwele Kwesistimu yakho Yokusebenza nezinhlelo zesofthiwe.
Qapha amasethingi Okucaca ne-DPIKwakhiwe amafonti amaningi ukuze ufunde ngokugcwele kukucaca okungu-1366 x 768. Uma unenkinga yokufunda ifonti yolimi lwakho sicela ubuyekeze amasethingi akho esibonisi kulokhu kucaca noma ngaphezulu uma kudingekile. Sicela uqaphele: sincoma ukuthi usebenzise izinhlelo ze-Office kusethingi ye-DPI ye-Windows emisiwe - 96 DPI. Ukusebenzisa isethingi ka-120 DPI kungase kubangele okuhlangenwe nakho okungalungile komsebenzisi we-Office kwezinye izinhlelo ze-Office ngokwenyusa osayizi bezingxoxo ze-Office.
Izinketho Zesifunda NolimiNgaphezu kwalokho kunconywa ukuthi zonkeIzinketho Zesifunda NolimikokuthiIphaneli Yokulawula zisethwe kulimi Lwephakethe Lezinsiza Zolimi Le-Microsoft® Office – IsiZulu
Ukuze ufake Iphakethe Lezinsiza Zolimi:
Ehlisaifayela Lokufaka Lephakethe Lezinsiza Zolimingokuqhafaza lesi sixhumanisiEhlisa Isifakeli Sephakethe Lezinsiza Zolimi
Uma Usuqedile Ukwehlisa Khetha okuthi Qalisa.
Landela iziyalezo zesikrini ukuze uqedele ukufaka.
Shintsha ukusebenzisana komsebenzisi ukuze kube ulimi Lwephakhethe Lezinsiza Zolimi
Ngemva kokuthi kufakwe Iphakethe Lezinsiza Zolimi, ungakwazi ukushintshela kulimi lokusebenzisana komsebenzisi (isizulu) ukusuka ngaphakathi kwezinhlelo ze-Office noma ukusuka kuhlelo Lokuthandwayo Kolimi lwe-Microsoft Office.
Ukuze ushintshe ulimi lokusebenzisana komsebenzisi ukusuka Kokuthandwayo Kolimi:
QalisaOkuthandwayo Kolili Lwe-Office.
UkusukaOhlwini oluthi Khetha Izilimi Zokuhlela,khetha ulimi lwakho lokuhlela bese uqhafaza inkinobhoethi Setha Njengokumisiwe.
UkusukaOhlwini oluthi Khetha Izilimi Zesibonisi Nosizo, khethaUlimi lwakho Lwesibonisi bese uqhafaza inkinobho ethi Setha Njengokumisiwe.
Qhafaza inkonobhoethi KULUNGILE.
Ukuze ushintshe ulimi lokusebenzisana komsebenzisi ukusuka ngaphakathi kohlelo lwe-Office:
Iya kokuthiIfayela, Izinketho, bese ukhetha Ulimi.
UkusukaOhlwini oluthi Khetha Izilimi Zokuhlela,khetha ulimi lwakho lokuhlela bese uqhafaza inkinobhoethi Setha KULUNGILE.
UkusukaOhlwini oluthi Khetha Izilimi Zesibonisi Nosizo, khethaUlimi lwakho Lwesibonisi bese uqhafaza inkinobho ethi Setha KULUNGILE.
Amasethingi olimi owakhethile azosebenza ngesikhathi esilandelayo lapho uqalisa izinhlelo zakho ze-Office.
Shintsha ulimi lokupela
Iphakethe Lezinsiza Zolimi Le-Microsoft - (IsiZulu) lingase libandakanye amathuluzi okuhlola ngolimi lwakho. Nansi indlela yokushintsha ulimi lwakho lokupela ekukhetheni kombhalo:
I-Excel: I-Excel isebenzisa isethingi yolimi yokuhlela Okuyinhloko Kwe-Microsoft Office ukuze inqume ulimi lwesipelingi esimisiwe. Ukuze ushintshe lokhu, qhafaza okuthiIfayela bese uqhafaza okuthi Izinketho. Qhafazainketho Yokuhlola bese ukhetha ulimi olulodwa olutholakalayo ukusuka kuhlu lolimiLwesichazamazwi.
I-Outlook, i-PowerPoint, i-Word kanye ne-OneNote: Khetha umbhalo ofisa ukuhlola ukupela kwawo, qhafaza okuthi Buyekeza, qhafaza inkinobho ethiUlimi, bese uqhafazainketho ethi Setha Ulimi Lokuhlola. Khetha ulimi lwakho olufiswayo ebhokisini lohlu bese uqhafaza okuthiKULUNGILE.